Weligaa ha uga tagin kursiga musqusha kor u kaca inta aad musqusha dhaqayso - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Weligaa ha uga tagin kursiga musqusha mid kor u kacaya intaad musqusha dhaqayso - SANTE PLUS MAG
Dib uhelay asxaabteena ka socda Daily Mail, taladan ayaa kaa caawin doonta inaad ka fogaato khatarta. Taladan waxaa xitaa taageeray khibradda saynisyahan kaas oo cadeynaya in kor u qaadista baaxadda inta ay socoto biyahu aysan lahayn cawaaqib.
Saynisyahan baa su’aasha fiiriyay
Waa mawduuc ay ku muransan yihiin lammaanaha ugu da'da weyn adduunka. Maanta, saynisyahan ayaa eegay arrinta kala qaybineysa taageerayaasha kursiga musqusha kor iyo kuwa doorbidaya inay hoos u dhigaan. Waana kuwa dambe ee u muuqda inay sax yihiin. Saynisyahan ayaa falanqeeyay saameynta labada dhaqan wuxuuna soo gabagabeeyay. Isaga, caadadan kor u qaadista muraayadaha waa khatar. Magaceeda ? Charles Gerba, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga microbiology ee Jaamacadda Arizona, ayaa sharxaya in tilmaantani ay ka kooban tahay soo saarista "buufinta musqusha". Khabiirka takhasuska leh ayaa sharxaya in annaga oo kor u qaadnay baaxadda ka hor daadinta, aan oggolaanno dhibco biyaha ku jira si looga baxo. Dhacdo aan muhiim u ahayn caafimaadka. Si aad u hesho musqulo nadiif ah, waa inaad ogaataa hababka saxda ah ee loo nadiifiyo.
Ka tagida kursiga musqusha intaadan biyo bixin ka hor waa khatar. Xigasho: Shutterstock / Muuqaal qurux badan
Saynisyahannadu waxay ka hadlaan "saamaynta aerosol"
Markaan sii fureyno kursiga musqusha, biyaha ay ka buuxaan bakteeriyadu waxay weeraraan hareeraha hareeraha. Noolahaani wuxuu xitaa dejiyaa dusha sare ee hareeraha leh jajabyo ku dhegi kara cadayga, shukumaanada iyo derbiyada. Saynisyahannadu waxay ka hadlaan ifafaalahan iyagoo ugu yeeray "saamaynta aerosol". Sida laga soo xigtay iyaga, xitaa wey kordhin kartaa infekshanka fayraska sida hargabka ama bakteeriyada kale. Tani waxbarasho oo lagu daabacay joornaalka 'Applied Microbiology' ayaa cadeynaya.
Jeermiska wuxuu ku nagaadaa musqusha
Marka loo eego natiijooyinka daraasaddan, jeermiska iyo microbes-ka ayaa ku sii jira baaquli musqusha. Noolahaani wuxuu qabsadaa faashadda xitaa ka dib markii uu biyo dhaqay dhowr jeer. Lama nadiifin karo ka badan dawada jeermiska lagu nadiifiyo. Aragtiyadan waxaa sidoo kale la wadaaga a article saynisyahan kaas oo awood u yeeshay inuu markhaati ka ahaado dhibaatooyinka la midka ah ee ku faafay jeermiska iyo bakteeriyada. Kuwani sidoo kale waxay joogaan sariirta iyo waxaa jira xalal lagu nadiifiyo.
Bakteeriyada musqusha - Xigasho: Profline
Kumanaan dhibic ah ayaa ka soo baxa baaquli
Waxaa dib ugala hadlay asxaabteena barta Ingiriiska The Independent, indha indheyntaani waxay sidoo kale ku muujineysaa halista caadoyinkan sawirada Sida laga soo xigtay daraasadda nooca nadiifinta musqusha Harpic, 55% dadka qaangaarka ah ee Boqortooyada Midowday ma xidhaan suuliga markay biyo raadsadaan. Si kastaba ha noqotee, biyaha weelka ku jira ayaa wali wasakheysan ka dib markay taabtaan jeermiska. Mid ka mid ah sababaha loo noqon karo taxaddar marka la nadiifinayo kursigan.
Nooca nadiifinta musqusha ee Harpic ayaa muujisay saameynta ay leedahay in lagu maydho xarkaha furan. Xigasho: Harpic
Astaantu waxay isticmaashay kamarad xawaare sare leh
Si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee khatartan nadaafadeed, astaanta ayaa adeegsatay habab farsamo oo weyn. Si loo sawiro dhibcahan "aerosol-like" ah, Harpic wuxuu adeegsaday kamarad xawaare sare ku takhasusay si uu u soo qabto waxyaalahan yaryar. Waxay umuuqataa rashka, laakiin runti waa biyo shubaya oo maddiibada ka soo jiidanaysa. Ka dib markii ay sameeyeen sahan, calaamadu waxay ogaatay in 47% maadooyinka aysan garanaynin khataraha ay wadaan halka 47% ay ka baqayaan inay taabtaan muraayadaha. 15% way illoobeen tilmaantan. Khalad kale oo caadi ah oo aan la sameyn: saar warqad musqusha kursiga musqusha.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/ne-lsez-jamais-la-lunette-des-toilettes-relevee-pendant-que-vous-tirez-la-chasse-deau/
TELES RELAY 40665 posts 1 comments
Dhamaadka Dj Arafat ka dib, cunuga Philippe wuxuu ku dhashay Chrlst wuxuuna na siinayaa fariin muhiim ah (video) - Video
HALIS DAGAALKA NATHALIE KOAH IYO BISCUIT BADDA SOFITEL ABIDJAN - Video